Deredza Kushushikana - Iwo Akanakisa Mazano Ekuti Uwane | Bezzia
Mazano ekuderedza kunetseka
Susana godoy | 12/09/2021 18:00 | Psychology
Haisi chokwadi chekudzora kushushikana? Ehezve hachisi chinhu chiri nyore kwazvo kuita asi zviri kwatiri kusarudza nhanho nhanho kana makiyi anotibatsira kuti titonge pamusoro pehupenyu hwedu uye nepfungwa dzedu. Nekudaro, isu tinokusiya iwe nerubatsiro rukuru iwe rwaunofanirwa kuisa mukuita nekukurumidza sezvazvinogona.
Dzimwe nguva zvinoratidzika sekushamisika muhupenyu hwedu uye izvi zvinogona kutungamira kumatambudziko makuru kana kutya kwekutyisa iyo yatinogona zvakare kuva nayo panguva yatisingatomboitarisira. Saka, zvisati zvaitika zvese, isu tinofanirwa kusvika kubhizinesi. Ino inguva yekurwisa dambudziko nenzira yakanakisa isu isu kuziva sei.
1 Gara uchiisa pekutanga muhupenyu hwako
2 Usatombo kunetseka zvakanyanya
3 Gara uchiratidza manzwiro ako
4 Tora nguva zuva rega rega
5 Wana zororo rakakwana kuti usanyanya kunetseka
Gara uchiisa pekutanga muhupenyu hwako
Pane zvinhu zvisingakwanise kuitwa kubva kune rimwe zuva kuenda kune rinotevera, nekudaro, isu tinofanirwa kutora diki asi nzira dzakachengeteka. Chimwe chezvakanyanya kukosha ndeichi. Kuzvidya mwoyo kunoonekwa kana isu tatozara nekushushikana, patisingakwanise kuitora zvakare uye tsinga dzedu dziri pamusoro. Naizvozvo, nguva dzose zviri nani kumira uye kufunga. Nekuti hwaro hwezvose kuisa pamberi izvo zvakakosha chaizvo uye isu tinofanirwa kuzviita. Izvo zvisingaiti, zvinogona kumirira nekuti hutano hwedu hunotanga kuuya. Saka, hwaro hwemazuva edu huri musangano.
Usatombo kunetseka zvakanyanya
Ukasasvika panguva yekuzadzisa zvese zvawaifunga, usazvidya moyo. Nekuti isu tese tine miganho uye haufanire kuipfuura kana tisingatozive zvakatimirira. Zvirinani kufunga zvakanaka, nekuti kana iine mhinduro, chii chiri basa rekushushikana zvakanyanya? Uye kana usina, saka hazvidiwe futi. Tinofanirwa kurega pfungwa dzakashata dziyerere nekuti zvikasadaro dzinozogara mumusoro medu uye zvichanyanya kunetsa kuenda kumberi.
Gara uchiratidza manzwiro ako
Izvo zvekusiya izvo zvatinonzwa mune yega yega nguva mukati hachisi chinhu chakanaka futi. Naizvozvo, kuisa kunze kunogara kuri nyore. Kana uchikwanisa, hapana zvirinani kunze kwehama dzako kana avo vakasarudzika vanhu vauinavo muhupenyu hwako. Kana zvisiri, hapana chinhu senge nyanzvi munhu anokupa rairo rakanakisa. Asi imwe nzira kana imwe iwe unozonzwa zvirinani kana ukaiburitsa pane kuti urege kuisiya mukati. Zvirokwazvo iwe unotoziva, asi hazvisi nyore nguva dzose kuzviisa mukuita uye isu tinozviziva. Kana zvichikubhadhara iwe, tanga waedza kunyora iwo manzwiro uye iwe uchaona kuti iri danho rekutanga kuti unzwe zvirinani.
Tora nguva zuva rega rega
Unogona kunge usina nguva yakawandisa asi chinhu chakanaka ndechekuti isu tinofanirwa kugara tine maminetsi mashoma kwatiri. Mavari unogona kuita zvaunoda zvakanyanya, kubva pakutamba mutambo kusvika pakuteerera kumimhanzi. Chimwe chinhu chinoita kuti unzwe zvirinani, chinokuzorodza iwe, uye chinokupa simba rakaringana kuti urambe uchienda. Sezvauri kuona, hazvidiwe kutora matanho akaomarara, asi kuti uite diki zuva nezuva kuzadzisa izvo zvakavimbiswa. Uye nguva yedu yakawanda.
Wana zororo rakakwana kuti usanyanya kunetseka
Ehezve, vanhu vanoda kudzikisira kushushikana havawanzo kurara zvakanaka usiku. Kusarara kunogona kuvapo uye chimwe chikamu chisina kunaka zvekuti kushushikana kunoramba kuri dambudziko. Nekudaro, isu tinofanirwa kumisikidza dzimwe tsika mazuva ese, izvi zvinofanirwa kuchengetedzwa mune nyaya yemapurogiramu. Nekuti chete ipapo muviri ndipo pauchazojaira zvirinani zvirinani. Asi hongu, kana tichinetseka kurara, isu tinofanirwa kuisa nhanho kuvanhu vakura sekusadya chikafu chemanheru, kugeza yekuzorora usati warara kana kudzima marudzi ese emidziyo. Iwe uchaona kuti sei nenzira iyi uye pamwe nematanho ese ematanho, iwe unogona kudzora kushushikana uye kudzidza kuisa kunetseka kwako padivi zvishoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Psychology » Mazano ekuderedza kunetseka
Nyanzvi pedicure: Maitiro ekuzviita nhanho nhanho
Mazai akatswanyika ane mbatatisi uye zucchini ane prawns